अब कोरोनाबाट माथि उठ्न नयाँ मेकानिजम जरुरी छ
शकुन्तला जाेशी आइतबार, भदौ २१, २०७७
प्रदेश ५ सीमावर्ती जिल्ला रूपन्देहीस्थित देवदह नगरपालिकामा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नियन्त्रणमै
छ । पछिल्लो समय गौतम बुद्धको मावली गाउँका रूपमा पहिचान स्थापित भएपछि यस क्षेत्र पर्यटकीय हिसाबले विकास हुने क्रममा थियो । संक्रमणको अवस्था र यसका कारण विकासको गतिविधिमा परेको प्रभावका सन्दर्भमा नेपाली पब्लिककी शकुन्तला जोशीले नगरपालिका प्रमुख हिराबहादुर खत्रीसँग गरेको अन्तर्वार्ता :
देवदह नगरपालिकामा संक्रमणको अवस्था के छ ?
पहिलो लकडाउनको अवधिभर परिस्थिति नियन्त्रणमै थियो, हालको लकडाउन खुकुलो भएपछि संक्रमण समुदायमा पुग्यो । त्यसअघिसम्म हामीले सबै नागरिकलाई अनुगमन गर्ने र क्वारेन्टिनमा राखेपछि मात्रै घरमा पठाउने व्यवस्था गरेका थियौं ।
तिबेला करिब १ हजार मानिसलाई क्वारेन्टिनमा राखियो, तीमध्ये संक्रमण देखिएका व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राखेर ठीक भएपछि पठाएका हौं । तर लकडाउन खुलेपछि स्थानीय तथा भारतीय नागरिकसम्मको आवतजावत बढ्यो । त्यही क्रममा एक जना बैंकका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि नगर सिल गरियो । नगरको सिआइसिपी टोलीमार्फत पिसिआर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरियो । त्यसमध्ये संक्रमण देखिएका तीन जना निको भएर फर्कनुभयो ।
अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट देखिएका केही संक्रमितको हाम्रो निगरानीमा आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ । नगरपालिकामा तयार चारओटा क्वारेन्टिनमध्ये दुईओटा अहिले सञ्चालनमा छन् । सुरुमा विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टिनलाई सामुदायिक भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ । सुरुदेखि अहिलेसम्म देखिएको ४५ जनामध्ये २२ जना ठीक भएर फर्किसक्नुभएको छ, बाँकी उपचाररत हुनुहुन्छ । उहाँहरूको स्वास्थ्यमा समस्या छैन ।
३५ बेडको आइसोलेसन सेन्टरमा पाँच जना संक्रमित हुनुहुन्छ । स्वाब परीक्षणको नतिजा पहिले निकै ढिला हुन्थ्यो, अहिले तीनदेखि चार दिनमा आउँछ । क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिका लागि खानेबस्ने व्यवस्थादेखि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक औषधीहरू उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेका छौं । नगरभित्रको संक्रमणको स्थिति नियन्त्रणभित्रै छ ।
संक्रमित वा अन्य बिरामीले यथासमय उपचार नपाइरहेको गुनासो पनि छन् नि ?
यो सम्बन्धमा संघीय वा प्रदेश सरकारको प्रोटोकल परिवर्तन हुँदा पनि केही अप्ठ्यारो जस्तो देखिएको हो । हिजो बुटवलको औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएको कोरोना अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय भनिएको थियो । त्यसबाहेक प्रादेशिक अस्पतालले पनि ज्वरोको बिरामी हेर्ने भन्ने थियो ।
भैरहवाको भीम अस्पताले पनि कोरोना अस्पतालका रूपमा उपचार दिने भन्ने थियो । भर्खरै त्यहाँ भेन्टिलेटरसहितका पाँचओटा आइसियू सेन्टर सूचारु भएको छ । आमनागरिक जान सक्ने अस्पतालमा कोरोनाको उपचार थालिएपछि अन्य बिरामी लिन समस्या भएको हुन सक्छ ।
संक्रमण अझै बढ्यो भने यो तयारीले पुग्दैन । अर्को, संक्रमित हुनेबित्तिकै उपचारमा धेरै अवरोध छ । स्रोत साधन र जनशक्ति नपुग्दा एउटा एक्सरे गर्न पनि नागरिकले ठूलै महाभारत झेल्नुपर्ने अवस्था छ । सहज वातावरणमा उपचार पाउने अवस्थाचाहिँ छैन । गर्भवती महिला, मिर्गाैला वा यस्तै गम्भीर रोगले पीडितहरूले पनि पिसिआर रिपोर्ट कुर्नू भन्ने प्रोटोकलले जनस्तरमा अलिकति समस्या सिर्जना भएको छ ।
तर, यी समस्यालाई पनि स्थानीय स्तरमा समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । मिर्गाैलाको डायलसिस गर्ने बिरामीको स्वाब नगरपालिकाकै पहलमा पठाइएको छ । यसले नागरिकमा अतिरिक्त आर्थिक भार पनि बेहोर्नुपरेको छ । केही जटिलता छन् ।
नगरभित्रका जनताको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? राहत बाँड्नुपर्ने अवस्था छ ?
यो कृषि पेसा बहुल क्षेत्र हो । त्यसकारण भोकले नै समस्या पर्ने अवस्थाका मानिस खासै नहोलान् । तर यतिबेला समग्र देशकै अर्थतन्त्र डुबेको छ । यसबाट माथि उठ्न नयाँ मेकानिजम् जरुरी छ । यो क्षेत्रमा भएका साना उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन सबै मर्कामा छन् । बन्दको मारमा यहाँका दुग्ध उत्पादक किसान बढी प्रभावित छन् ।
उत्पादित दूधले बजार नपाउने, अलिअलि गए पनि बजारबाट दूधको पैसा नउठ्ने र दानाको भाउ महँगिएको, दुध नदुहुने वा पालेका पशुलाई यसै छाडिदिने अवस्था हुँदा पशुपालक किसान निकै अप्ठ्यारोमा छन् । निम्तिँदै गरेको आर्थिक जटिलताबारे अहिले सरोकारवाला निकायबीच छलफलका क्रममा छौं ।
आर्थिक गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउने योजना छ ?
अब लामो समय यसरी बस्ने अवस्था छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले यसबारे सोच्नुपर्छ । नागरिकको सचेतना, सतर्कताबिना राज्यले बनाएको नीति, नियमले मात्रै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न भन्ने निश्चिय भइसकेको छ । यसको सामना गर्ने आत्मबल र सचेतना हाम्रो नगरबासीमा विकास भएको पनि पाइएको छ ।
हामीले पनि पहिलो प्राथमिकतामा नगरबासीको ज्यानको सुरक्षालाई राखेका छौं । अब सावधानी, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई अपनाउने, बाहिरबाट आएकालाई निगरानी गर्दै जनजीवनका नियमित कार्यलाई अगाडि बढाउन मानसिक रूपमा तयार हुनैपर्छ । यो एउटा स्थानीय तहले मात्रै निर्णय गरेर हुने कुरा होइन । हाम्रा विकास निर्माणलाई गति दिन र स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू विकास गर्ने सन्दर्भमा सरकारको ठोस योजना चाहिन्छ ।
सरकारको योजनामा एक भएर अगाडि बढ्ने बलियो प्रतिबद्धता देशवासी, नगरवासीमा आवश्यक छ । जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले रूपन्देहीमा लकडाउनलाई खुकुलो पारेको छ । अब नगरवासीको संयम र सचेतता अपनाएर गतिविधि गरिदिन पनि म अनुरोध गर्छु ।
#कोरोना भाइरस #किसान
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २१, २०७७ ००:०९